XOG: Sidii Uu Ku Burburay Heshiiskii Barcelona & Marco Asensio, Ciyaartoy Sabab U Noqday, Guri Uu Ka Raadinayey Tuulada Lionel Messi Iyo Geeridii Murugada Lahayd Ee Hooyadii – GOOL24.NET
XOG: Sidii Uu Ku Burburay Heshiiskii Barcelona & Marco Asensio, Ciyaartoy Sabab U Noqday, Guri Uu Ka Raadinayey Tuulada Lionel Messi Iyo Geeridii Murugada Lahayd Ee Hooyadii
September 13, 2018 Cabdiwahab Ahmed
Marco Asensio ayaa mar kale indhaha dunida qabsaday Salaasadii, markii uu gool qurux badan ka dhaliyey Croatia, isla markaana uu saddex gool oo kale caawiye ka noqday, halka bandhiggiisii guud ee ciyaartu uu sabab u noqday in Spain ay 6-0 ku khaarajiyo Croatia.
22 jirkan ayaa labadii sannadood ee tegay aas-aasi u ahaa guulihii Real Madrid ay ka gaadhay tartanka qaramada Yurub ee UEFA Champions League iyo sidoo kale horyaalkaba, kaddib markii uu soo dhamaystay hal sano oo amaah ah oo uu ugu soo ciyaaray Espanyol oo Los Blancos ay u dirtay markii ay kala soo wareegtay Mallorca sannadkii 2014.
Asensio ayaa waxa mustaqabalkiisa ku duugay sir xidhiidh la leh Barcelona, taas oo ay wakhti noloshiisa ka mid ah isla qaateen heshiis isfaham ah, ka hor intii aanu si layaab leh u burburin heshiiskaasi.
Sannadkii 2014 ka hor intii aanu Real Madrid imanin, waxa uu Marco Asensio heshiis isfaham ah la gaadhay kooxda Barcelona, taas oo sidoo kale ay kooxdiisii wakhtigaas ee Real Mallorca ay ka heshiiyeen lacagta ay kula kala wareegayaan. Intaas kaddib, waxa uu Asensio bilaabay inuu raadiyo guri uu ka dego magaalada Barcelona, iyadoo uu si gaar ah u doonayey xaafadda Castellefels oo ah halka uu deggan yahay Lionel Messi.
Heshiiskaas oo ku kacayay €4.5 milyan Euro oo ay Barcelona bixiso, ayaa waxa wakhti dambe go’aan kale qaatay madaxweynihii Blaugrana ee wakhtigaas, kaas oo diiday inuu bixiyo lacagtaas, isla markaana ka door-biday difaacyahanka Douglas oo ay kula soo wareegeen lacag dhan €5.5 milyan.
Go’aankan waxa uu fursad u noqday Real Madrid oo lacag dhan €4.5 milyan Euro u shubtay Mollorca, isla markaana kasoo qaadatay Asensio, sidaas ayaanu ku noqday laacibka weyn ee ay hadda taqaano dunidu ee hormoodka u ah Real Madrid.
Saddexdii kulan ee horyaalka ee xili ciyaareedkan, waxa uu Marco Asensio si buuxda u qaatay booskii uu banneeyey Cristiano Ronaldo, iyadoo lagu galay sad, waxaana uu ka garab ciyaaray Karim Benzema iyo Gareth Bale oo wada-shaqayntooda ka sokow uu ahaa khatar ay difaaca kooxaha kasoo horjeeda mar walba ku mashquulsanaayeen.
Bixintii Magaca Marco iyo Geeridii hooyadii
Hooyadii oo lagu magacaabi jiray Maria Willemsen, waxay u dhalatay waddanka Netherlands ama Holland, waxaanay taageere u ahayd halyeygii dalkooda ee Marco van Basten. Markii uu dhashay wiilkeedu waxay u bixisay magaca Marco oo lagu sii day Asensio oo ah magaca guud ee waalidiintii, sidaas ayaanu ku qaatay magaca weyn oo lagu xidhiidhinayo Van Basten.
Nasiib-darro, hooyadii may calfanin inay garoomada ka daawato amaba ay goob-joog u noqoto bandhig ciyaareedkiisa, waxaanay sannadkii 2011 u geeriyootay xanuunka halista ah ee Cancer. Ka har intii aanay geeriyoonin, tababar kasta oo uu tegayo Asensio, iyada ayaa gaadhigeeda kusoo qaadi jirtay illaa garoonka tababarka. Markii uu siddeed jir noqday, waxa ay Maria Willemsen iyo wiilkeeda Marco Asensio ay la kulmeen madaxweynaha Real Madrid, Florentino Perez oo ay sawir la galeen, waxaana uu ku yidhi hadallo illaa hadda uu Marco xasuusto oo ahaa: “Wiilkan yari maalin ayuu u ciyaari doonaa Real Madrid.”
Ka sokow maalmo madow oo noloshiisa soo maray markii ay geeriyooday hooyaddii, hadda waa uu kasoo kabtay, saamayn badanna kuma lah, hase yeeshee gool kasta oo uu dhaliyo, waxa uu ku xusaa hooyadii isaga oo gacmaha ku tilmaamaya marka uu dabbaal-degayo, markii ugu dambaysay ee uu sidaas sameeyaana waxay ahayd kulankii Croatia iyo Spain.
Si kastaba ha ahaatee, fursadda ka luntay Barcelona waxay u tahay mid ay qoomamayso, isagana waxa uu nasiibku siiyey Real Madrid oo uu ka noqday xiddig weyn oo loo hanweyn yahay.